Indawo Yokulungisa Amatshe I-Systerm Factory - Abakhiqizi baseChina abahlinzeka ngamatshe abahlanzekile
Wokucwebezelisa iWax- Bellinwax
I-waxinwa yamatshe epholisha i-Bellinwax iyi-wax ekhethekile yokuvikela ukukhanya, yenziwa ukukhanya kwendawo futhi ikhanye nge-longtime.Can ukupholisha imabula negranite, efanelekile noma yiliphi itshe.
PAG Yellow wokucwebezelisa powder (5 Extra)
I-powder eyengeziwe engu-5 yokupholisha yemvelo ngemuva kokumiswa kwesihlabathi ngemabula, itshe, i-travertine, i-palladium ne-grit phansi. I-5 powder eyengeziwe ayiniki ukukhanya kwemvelo kuphela ezindaweni zemabula ngaphandle kokudala amafilimu, inika imabula isicwebezelisi semvelo, kodwa futhi yenza izindawo ezingangeni kakhulu emanzini nasekungcoleni, okwenza ukuhlanzwa kube lula.
I-powder epholishi ephuzi -YP
Imabula evuselelwe i-alkali ngaphezulu futhi ingcolile, i-polishing powder yenziwa ngezinhlobo ze-asidi, ingadlala indima ekunciphiseni kwe-asidi ne-alkali nokuhlanza, okwenza indawo ikhanye futhi ihlanzeke. Futhi thuthukisa isicwebezelisi semabula yompofu ngemuva kokugaya.
I-MR2 ingumkhiqizo odumile wokulungiswa kwemabula wokuphinda wenze i-crystallization nokunakekelwa kwansuku zonke komhlaba. Bangakwazi ukulungisa ngokushesha ukugqoka komhlaba futhi bandise ukucwebezela kobuso.
I-MR3 ingumkhiqizo wokunakekelwa wemabula oqinisiwe osetshenziselwa ukucwebezela nokupholisha indawo yemabula. Ingashesha ukubuyisa isicwebezelisi semabula ebusweni, ithuthukise ukuminyana komhlaba futhi igqoke ukumelana. Sebenzisa i-MR3 njalo ukugcina indawo yemabula isiza ukulungisa kahle imihuzuko kubuso bemabula obugugile, ubuyisele isicwebezelisi sendawo futhi uthuthukise ukucaca.
I-2501 iyi-crystallizer yakudala evela ku-NCL, yathuthukiswa yaba lula ukusebenzisa uhlelo lokubuyisela imabula, i-terrazzo nokupholisha phansi. ICrystallizer Spray N 'BUFF ikhiqiza ipholishi ephezulu kakhulu. Indawo esanda kubuyiselwa izomelana nezikhafu nokuklwebheka. Le ndawo ebuyisiwe izohlala isikhathi eside kakhulu. I-Crystallizer Spray N 'BUFF iyoma njengoba udonsa futhi ngenxa yalokho ayidingi ukuhlanzwa okungcolile.
I-crystallizer yezitezi zemabula ne-terrazzo –AGUILA CR-2
I-CR-2 - Sealer-crystallizer yemabula nephansi ye-terrazzo inikeza izinga eliphakeme lokukhanya okuhlala njalo nokungazweli, ukugcina phansi kuvaliwe futhi kuvikelwe isikhathi eside.